COUNTRY [ देश ]
काठमाडौं महानगरमा बालेन साहको अग्रता कायमै, उपप्रमुखमा सुनिता ४ हजार मतान्तरले अगाडि
बिजमाण्डू May 16, 2022 10:14 AM
काठमाडौं। काठमाडौं महानगरपालिकामा प्रमुख पदका स्वतन्त्र उम्मेदवारको अग्रता कायमै रहेको छ। पछिल्लो मतपरिणाम अनुसार प्रमुख पदका स्वतन्त्र उम्मेदवार बालेन्द्र साह (बलेन) ले ५ हजार ६९२ मत प्राप्त गरी आफ्नो अग्रता कायम राखेका हुन्।
नेकपा एमालेका केशव स्थापितले २ हजार ९९२
वैशाखमा पनि रेमिटेन्स आयमा सुधार, भारतबाट आउने रेमिटेन्समा सबैभन्दा राम्रो प्रगति
बिजमाण्डू May 16, 2022 8:48 AM
काठमाडौं। डलरको भाउमा आएको सुधारसँगै बैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरु रेमिटेन्स पठाउन उत्साहित भएको देखिएको छ। खाडी, मलेसियालगायत अन्य विकसित मूलुकमा गएकाहरुले पठाउने रेमिटेन्ससँगै भारतबाट आउने रेमिटेन्समा पनि निक्कै सुधार भएको देखिएको छ।
रेमिटेन्स क्षेत्रमा काम गर्नेहरुका अनुसार, कोभिडकालकै
भरतपुरमा रेणुले उछिनिन् सुवेदीलाई, काठमाडौंमा स्थापितलाई ८३ मतले पछि पार्दै बालेन शाह अगाडि
बिजमाण्डू May 14, 2022 6:39 PM
काठमाडौं। भरतपुर महानगरपालिकामा ३५० मत गनिसक्दा गठबन्धनकी उम्मेदवार रेणु दहालले पहिलोपटक अग्रता लिएकी छिन्। नेकपा माओवादी केन्द्रीकी दाहालले नेकपा एमालेका विजय सुवेदीलाई ६ मतले पछि पारेकी हुन्।
यससँगै पछिल्लो गणनाअनुसार दाहालको १३३ मत छ भने सुवेदीको १२७।
पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गरे मतदान, भरतपुर महानगर वडा नं १४ बाट हाले मत
बिजमाण्डू May 13, 2022 1:13 PM
काठमाडौं। पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले मतदान गरेका छन्।
दाहालले चितवनको भरतपुर महानगरपालिका वडा नं १४ स्थित पुलिस स्कुल शान्तिपुरबाट मतदान गरेका छन्।
शुक्रबार बिहान ७ बजेदेखि स्थानीय तह निर्वाचनका लागि मतदान हुँदैछ।
बेलुकी ५ बजेसम्म
उद्योगी विनोद चौधरीले गृहजिल्ला नवलपुरबाट भोट हाले, देवचुली नगरपालिका-२ बाट मतदान
बिजमाण्डू May 13, 2022 12:56 PM
काठमाडौं। उद्योगी विनोद चौधरीले मतदान गरेका छन्।
नेपाली कांग्रेसका सांसद चौधरीले नवलपुरको देवचुली नगरपालिका-२ को दिव्य युवा समाज भटक मतदान केन्द्रबाट मतदान गरेका हुन्।
बेलुकी ५ बजेसम्म मतदानका लागि समय
उद्योगी पशुपति मुरारकाले पनि गरे मतदान, थापाथलीको गुहेश्वरी विद्यालयबाट हाले भोट
बिजमाण्डू May 13, 2022 11:41 AM
काठमाडौं। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्व अध्यक्ष पशुपति मुरारकाले पनि मतदान गरेका छन्।
काठमाडौं महानगरपालिकाका मतदाता मुरारकाले थापाथलीको गुहेश्वरी माविबाट भोट हालेका छन्।
स्थानीय तह निर्वाचनमा उद्योगी व्यवसायीहरु सक्रिय रुपमा मतदानमा सरिक भइरहेका छन्।
शुक्रबार बिहान ७ बजेदेखि स्थानीय तह निर्वाचनका लागि मतदान
सडकमा सवारी चाप कम, ट्राफिक प्रहरीको संख्या थोरै, उपत्यकाका ट्राफिक चुनावी सुरक्षामा
सविन ढकाल/बिजमाण्डू May 11, 2022 8:57 AM
काठमाडौं। तपाईँले आजभोलि काठमाडौंका सडकमा सवारी र मानिसको उपस्थिति कम भएको महशुस गर्नु भएको छ ? दशैं तिहारको जस्तो सुनसान त पकै होइन तर पनि केही सडकमा भने सवारी र मानिसको भिड भने पातलिएको छ।
काठमाडौं उपत्यकामा विभिन्न कामका सिलसिलमा
बुटवलमा सटर फोडेर ५ करोडको सुन चोरी गर्ने समूह पक्राउ, चोरी समूहका सबैजना भारतीय
बिजमाण्डू May 10, 2022 9:16 PM
बुटवल। रुपन्देहीको बुटवलस्थित एक सुनचाँदी पसलबाट चारकिलो बढी सुनसहित ५ लाख नगद चोरी गर्ने समूहलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ।
पक्राउ पर्नेहरुमा भारत जौहरी मोहल्ला लखनउका ३६ वर्षीय मोहसिन अब्दुल्ला खान, भारत साई एन्क्लेव गोमती बिहारका २५ वर्षीय मोहद जिशान खान
इपिसेन्टर भरतपुर : जगन्नाथको उम्मेदवारीले दैनिक नयाँ तरंग, एमाले उत्साहित, रेनुलाई के असर?
नेत्र तामाङ/बिजमाण्डू May 10, 2022 9:29 AM
काठमाडौं। चितवनको भरतपुर महानगर चुनावी ब्याटलमा सबैभन्दा बढी चासो र चर्चाको विषय बनेको छ। प्राडा सूर्यराज आचार्यका अनुसार यहाँ जगन्नाथ पौडेलको उम्मेद्वारीले दैनिक नयाँ लहर आउँदैछ। सत्ता गठबन्धन तालमेल गर्दा आफ्नो पार्टीले भरतपुरमा प्रमुख पद पुनः माओवादीलाई छाडिदिएपछि कांग्रेसका पुराना अगुवा पौडेलले
वैशाख २७ मध्यरातदेखि ३० गते मतदान नसकिएसम्म मदिरा बिक्री र सेवनमा प्रशासनले लगायो प्रतिबन्ध
बिजमाण्डू May 8, 2022 8:13 PM
काठमाडौं। जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले स्थानीय तह निर्वाचनको समयअवधिभरका लागि मदिराजन्य पदार्थ बिक्री र सेवन गर्न प्रतिबन्ध लगाएको छ।
यही वैशाख ३० मा हुने स्थानीय तह निर्वाचनलाई लक्षित गरेर प्रशासनले मदिराको बिक्री र सेवनमा रोक लगाएको हो।
कार्यालयले आइतबार एक विज्ञप्ति जारी
VIEW ALL NEWS FROM COUNTRY
माछापुच्छ्रे क्यापिटलको कामु सीइओमा निरजमान सैंजु नियुक्त, बैंकिङमा १५ वर्ष बढीको अनुभव
काठमाडौं। माछापुच्छ्रे क्यापिटल लिमिटेडको कार्यवाहक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) मा निरजमान सैंजु
पारिवारिक व्यवसायलाई नयाँ उचाई दिँदै हाइलाइफ, लाख लगानीले बनायो १०० करोडको कम्पनी
काठमाडौं। सानैबाट आधुनिक प्रविधिमा रुचि राख्ने प्रशान्त घिमिरेलाई आफ्नो पारिवारिक खानेकुराको व्यवसायप्रति खासै लगाव थिएन। प्रशान्त स्कुल पढ्दादेखि नै सफ्टवेयर बनाएर बेच्ने गर्थे। बुटवलका प्रशान्तले कक्षा १० सम्मको पढाई भने धुलिखेलको एक विद्यालयबाट गरेका थिए।
२९ वर्षका प्रशान्त सम्झन्छन्, ' म
सेञ्चुरी कमर्सियल बैंक: बढेको व्यवसायले लगानीकर्ता मक्ख, सस्तोमा उठाउने अवसर यही हो?
काठमाडौं। तरलता संकटको वर्तमान अवस्थामा समेत व्यवसायलाई फराकिलो आकार दिन सेञ्चुरी कमर्सियल बैंक सफल छ। तेस्रो त्रैमासको तथ्यांकलाई मूल्यांकन गर्दा सेञ्चुरीले एक आर्थिक
'अनुत्पादक लगानी निरुत्साहित गर्दै आयात घटाउनुको विकल्प छैन,' आदित्य पोखरेलको विचार
केही दशकयता नेपालमा धेरै राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक परिवर्तनहरू भए। जसको फलस्वरूप दिगो सामाजिक आर्थिक भौगोलिक र मानव स्रोत संसाधन विकासका निमित्त अपरिहार्य रहने विभिन्न आयामहरूको
स्थानीय चुनावमा हुने अर्बौं खर्चले अर्थतन्त्रमा कति लाभ? यस्तो छ अर्थविद्हरुको लेखाजोखा
काठमाडौं। शुक्रबार ३० वैशाखमा हुने निर्वाचनका लागि सरकारले लगभग सबै तयारी सकेको छ। एक दिन मात्र टाढा रहेको निर्वाचनका लागि मतदाताहरु आ-आफ्ना स्थानीय तहमा फर्किने क्रम यतिबेला अन्तिम प्रहरमा
'सरकारसँग नीतिगत डिफ्रेन्सेस हुन्छ, जुन व्यक्तिगतमा परिणत भयो,' गभर्नर अधिकारीको अन्तर्वार्ता
सर्वोच्च अदालतबाट पुनर्स्थापित भएपछि नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी नियमित काममा फर्किसकेका छन्। सरकारले कमजोर आरोपहरु लगाएर सनकका